VFX Legion သည် ၅ နှစ်မြောက်အကြီးတန်းအနုပညာရှင်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်၎င်း၏ပိုက်လိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် | NAB သတင်းများ |5NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အကြီးတန်းအဆိုတော်များ၏လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်၎င်း၏ပိုက်လိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ VFX Legion Marks 5th နှစ်မြောက်
VFX Legion, ထိရောက်, အရည်အသွေးမြင့်ဆုံးမှအဆုံးတိုင်အောင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Episode ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများနှင့်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေပေးအထူးပြုသည့် LA ကစတူဒီယိုမကြာသေးမီကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်အခြေခံအဆောက်အအုံမှအကြီးတန်းအခွက်တဆယ်နှင့်ပွုပွငျပွောငျးလဲ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့်အတူ၎င်း၏ပဉ္စမနှစ်ပတ်လည်မှတ်သား ကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာပိုင်းရှုခင်း။ တသမတ်တည်းတင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံစဉ်ထပ်မံချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်, ကြီးမားတဲ့ရိုက်ချက်အရေအတွက်, ရှုပ်ထွေးသောသက်ရောက်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုဘတ်ဂျက်နှင့်အတူမျိုးစုံစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်စတူဒီယိုရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်။
အဆိုပါ Burbank-based စတူဒီယိုဗဟိုများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲ
အဆိုပါ VFX ချောမွေ့စွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုရိုက်ကူးနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းကြောင်းသေချာစေရန်ကင်မရာ data တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး, Matt လင်း, DP မှာ Oliver Bokelberg
ရုပ်မြင်သံကြား၏ asteadystream လက်ရှိရာသီပြီးနောက် VFX Legion ရာသီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်သောအခြားသူတွေတို့တွင် '' Madam အတွင်းရေးမှူး 'နဲ့' မနက်ဖြန်၏ Legends, '' လူသတ်မှုနှင့်အတူ Away Get လုပ်နည်း 'ပါဝင်သောပြသထားတယ်။ အစစ်အမှန်လောကမှာရှိတဲ့အမြစ်တွယ်ပြပွဲတစ်ခုတိုးပွားလာအစစ်လားထင်ရတဲ့ CG ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်းစျေးကြီး, အချိန်-စားသုံးသို့မဟုတ်ရိုက်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအမြင်အာရုံပုံပြင်များမြှကြောင်းစမတ်ဖြေရှင်းချက်ပေး VFX Legion အပေါ်အားကိုး။
Nate Smalley, ထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်း, VFX Legion
VFX Legion 70 + အတွေ့အကြုံရှိအနုပညာရှင်များအနေနဲ့အစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာစုပေါင်းအားဖြင့်ပြည့်စုံ, ဝါရင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာများ, ထုတ်လုပ်သူများ, ကြီးကြပ်ရေးမှူး, အကြီးတန်းအခွက်တဆယ်နှင့်ထောက်ခံမှုန်ထမ်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ 2013 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်း, စတူဒီယိုရဲ့ State-Of-အနုပညာပိုက်လိုင်းဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးကာဘရော့ဘန်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖို့ access ကိုအတူဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှအလုပ်လုပ်ကိုင်အနုပညာရှင်၏အခွက်တဆယ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်တစ်ခုတည်းယူနစ်အဖြစ်အကြီးစားအသင်းများနှင့်အတူကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းရောက်ရှိဖို့။
တည်ထောင်သူနှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ဒါဝိဒ်သည် Hattin, အများ၏ဗိသုကာ
ဂျိမ်းဒါဝိဒ်သည် Hattin, တည်ထောင်သူ & Creative ညွှန်ကြားရေးမှူး, VF Legion
ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်အခြေခံအဆောက်အအုံ, အတှေ့အကွုံ 20-နှစ်အတွင်း Blockbuster ရွေ့လျားမှုပုံနဲ့တီဗီရှိုးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ helming အဖြစ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယိုများအတွက်ရိုးရာအခြေခံအဆောက်အအုံများပိုကောင်းအောင်ရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျစတူဒီယို၏မွေးရာပါန့်အသတ်အထူးပြုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအခွက်တဆယ်၏ကြီးမားသောအဖွဲ့များများအတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားနှင့်အတူ coupled ဗဟိုဆာဗာများနှင့်ဒေသခံအခွက်တဆယ်ဖို့ tethering ခွက်တဆယ်, အနုပညာရှင် '' တည်နေရာဆီလျှော်ပြန်ဆိုတဲ့ State-Of-The-Art ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရန် Hattin သတိပေးခံရသော။
အဆိုပါစတူဒီယိုမကြာသေးမီကတက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ Bryan Shepperd ဖလော်ရီဒါထဲက, Dynamics ကိုအဆိုတော်ကိုပို့ဆောငျ, ဗြိတိန်အခြေစိုက်ခဲ Matte ပန်းချီဆရာများ၏ထို့အပြင်အတူကျယ်ပြန့်ပိုက်ကွန်ကိုချပစ်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်, မာ့ခ် Adamson ၏အဲရစ် Ebling အားသာချက်ကို ယူ. , ပေါ့ပါး Lead ။ နိမိတ်လက္ခဏာသည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောအခွက်တဆယ်စတူဒီယိုရဲ့ချောမွေ့စွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဆက်သွယ်မှုများနှင့်နယ်ပယ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများကိုဆက်လက်။
မာ့ခ် Adamson, Matt ပန်းချီဆရာ, VFX Legion ရဲ့အဖွဲ့မကြာသေးမီထို့အပြင် Lead
Matte ပန်းချီဆရာမာ့ခ် Adamson, Framestore, Method ကိုများနှင့်ချုပ်အာရုံစိုက်တစ်ခု alumnus, 'က Galaxy ၏ Guardians' '', '' Ultron ၏ Avengers ခေတ် '' ပါဝင်သောအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ကားရှည်စာရင်းတွင် Captain America ကသူ့ကျွမ်းကျင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ဦးဆောင်လမ်းပြ '' Dracula မရေမတွက် , 'နဲ့' Dredd ။ '
"မာ့ခ် '' Madam အတွင်းရေးမှူးချုပ် 'ဖြစ်သော CBS ၏နိုင်ငံရေးဒရာမာအပေါ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏' 'ပါဝါ Rangers' 'တိုတို' Hattin ကပြောပါတယ်။ "ဖွဲ့စည်းမှုအဘို့သူ၏ကျွမ်းကျင်မှု-set နဲ့မျက်စိသည်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တန်ဖိုးရှိသောထို့အပြင်ပါစေ။ ဒါဟာရာသီငါတို့သွားလာရင်းမှ ', Madam အတွင်းရေးမှူး' '၏လာမည့်ရာသီအပါအဝင်တီဗီရှိုးများရောနှောအဘို့အအစစ်လားထင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖန်တီးရန်သူ၏အခွက်ထုတ်ချေးသော, မှုန်ပန်းချီဆရာဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်' 'လူသတ်မှုနှင့်အတူ Away Get လုပ်နည်း,' အဖြစ်အသစ်သောစီးရီးရဲ့ စောစော 2019 အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်စီစဉ်ထားနှစ်ခုအင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေ။ "
VFX Legion ရဲ့ခြင်း simulation နှင့် Dynamics ကိုဦးစီးဌာနကဖွင့်ဦးမှပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အဲရစ် Ebling ကဲ့သို့သော High-profile ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်သည်မိမိယာဉ် honing ထားပြီး X-Men Origins: Wolverine, '' GI Joe: လက်တုံ့ပြန်, '' နဂါး Tattoo နှင့်အတူမိန်းကလေး, '' Fast & Furious 'နဲ့' ဗန် Helsing ။ ' ယခင်ကဒီဂျစ်တယ်ဒိုမိန်း, Method ကို, Zoic စတူဒီယိုနှင့် Hydraulx နှင့်အတူသူသည်စားပွဲမှအတွေ့အကြုံတစ်ခုအကွာအဝေးတတ်၏။ စီးပွားဖြစ်နယ်ပယ်တွင် Ebling ရဲ့အလုပ်ဟာ Silver, Clio စပါးကိုရိတ်အဖြစ်တစ် VES ညိတ်လိုက်ပါတယ် '' Nike က။ Biomorph ''
"အဲရစ် CW ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး, အားမိမိအခွက်ချေးမနှစ်ကကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ '' မနက်ဖြန်၏ Legends," 'Hattin ကပြောပါတယ်။ "သူ့လိမ္မာပါးနပ်, အတွေ့အကြုံနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ၏အတိမ်အနက်ကိုသူ့အဖွဲ့ရဲ့အလုပ်လတ်ဆတ်သော, ဖန်တီးမှုဒစ်ဂျစ်တယ် Simulator နှင့်ဒိုင်းနမစ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' လက်တွေ့ကျတဲ့ရိုက်ကူးပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ "
တစ်ဦးအလွတ်တန်းအခြေခံပေါ်မှာခဲပေါ့ပါး Bryan Shepperd အတူလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် VFX Legion တရားဝင် onboard သူ့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ Shepperd ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား၏ဖြစ်စဉ်များရာပေါင်းများစွာများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖန်တီးထားပြီးထိုကဲ့သို့ '' အကျဉ်းထောင်လူငယ်များသို့, '' ပြစ်မှုဆိုင်ရာစိတ် 'အဖြစ်စီးရီးများအတွက်ပြသထားတယ်။ ' 'CSI: မိုင်ယာမီ,' 'အေးဖြစ်ရပ်မှန်' နဲ့ 'Chuck အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ' '
သူတို့သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေပေါ်မှာအသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကျေးလက်ဒေသ - "VFX Legion ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများကိုကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးအစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာစုပေါင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်နိုင်စွမ်းပေးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခွက်တဆယ်တစ်ကျယ်ပြန့်ရေကူးကန်တစ်ဂိတ်ဝေးနေသူများကဖန်တီးထားပါတယ် ကနေဒါဧရိယာ, "Hattin ကပြောပါတယ်။ "VFX Legion ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတိုးချဲ့ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်, နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခွက်တဆယ်တစ်ကျယ်ပြန့်ရေကူးကန်တစ်ဂိတ်ဝေးနေသူများကဖန်တီးထားပါတယ် - သူတို့သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေ-အိမ်တော်၌နေအိမ်စတူဒီယို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး shared VFX suite ကိုကနေအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ ကနေဒါမှာ။"
R & D အပေါ်စတူဒီယိုရဲ့အာရုံနှင့်အတူ၎င်း၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် artistry ဖြည့်
DP မှာ Oliver Bokelberg ပြန်လည်သုံးသပ်ကင်မရာဒေတာနှင့်အတူ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး, Matt လင်း VFX ချောမွေ့စွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုရိုက်ကူးနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းသေချာစေရန်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိမ္မာပါးနပ်။ လုံလုံခြုံခြုံစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းစဉ် VFX ကို Legion of Honour နှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အကြားအဆိုပါ Synergy, ထင်သာမြင်သာရှိမှုအသီးအသီးအနုပညာရှင်နှင့်တသားတ-to-တဦးတည်းအလုပ်လုပ်ရန်နှင့် VFX ဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသှငျအပွငျကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်၎င်း၏ LA က-based စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဖွတဲ့ကောင်းစွာ-တော၌ထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများကထောက်ခံနေသည် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်များ၏အမြောက်အမြား။
ပရိုတိုကောမှမကြာသေးမှီကအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ပွုပွငျပွောငျးလဲ CG ရိုက်ချက်များတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုရိုက်ကူးနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဿုံတိုင်းကင်မရာထောင့်ကိုက်ညီသောသေချာစဉ် client များ '' ထုတ်လုပ်မှုနှင့် postproduction ဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့စေရန်ဆက်လက်။ အဆိုပါစတူဒီယိုရဲ့ပိုက်လိုင်းဖွဲ့စည်းမှုအဘို့အ 3D တင်ဆက်မှု, ခြေရာခံဘို့ SynthEyes နှင့်နျူကလီးယားများအတွက် 3D, Redshift အတွက်, မာယာပါဝင်သောဆော့ဖျဝဲအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းမယ့်ခေတ်မီအခြေခံအဆောက်အအုံသို့ဝင်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိမ္မာပါးနပ်ခြင်းဖြင့် optimized ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူတစ်လက်လှမ်း LA ကစတူဒီယို၏ခြံထဲသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်ကိုယူခဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု, ထိရောက်မှု, တသမတ်တည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းအခွက်တဆယ်နှင့်အတွေ့အကြုံ၏ caliber: "ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ VFX Legion ရဲ့မစ်ရှင်မပြောင်းလဲရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အရာသီပြီးနောက်ရာသီပြန်လာမယ့်ရုပ်သံပြပွဲစောင့်ရှောက်, "Hattin ကပြောပါတယ်။ "မာ့ခ်အဲရစ်နှင့် Bryan ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူတစ်ဦးအကြီးအထိုက်မတန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကရှေ့ကွေး၏ VFX Legion ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဓိကသော့ချက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
VFX ကို Legion of Honour နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မှာစတူဒီယိုအီးမေးလ်ပို့ [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး www.VFXLegion.com.
CES2017 ဂျိမ်းဒါဝိဒ်သည် Hattin အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် တီဗီများအတွက် VFX VFX Legion 2018-09-28
ယခင်: အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ
နောက်တစ်ခု: SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးတွင် stem အလုပ်အကိုင်အတွက်မတူကွဲပြားခြင်း Explore မှ